Masaajida oo laga cambaareeyay weerarkii Stockholm | Somaliska
Qudbadii jimcaha ee masaajido badan oo ku yaal Sweden ayaa lagu soo qaaday weerarkii isqarxinta ahaa ee ka dhacay Stockholm sabtidii la soo dhaafay, ayadoo imamyadu ay cambaareeyeen weerarkaas kuna tilmaamey mid Islaamka ka soo horjeeda. Masaajida laga cambaareeyay weerarkaas ayaa waxaa ka mid ahaa masaajidka weyn ee ku yaal xaafada Södermalm Stockholm ayadoo uu imamka yiri "In qof is dilo waa xaaraam, in uu dadkale dilana waa xaaraam balse waxaa ka sii daran in uu dad aan waxbo galabsan ku dilo magaca Islaamka". Omar Mustafa oo ah gudoomiyaha ururka Muslimiinta Stockholm ayaa sheegay in ay arintu tahay in ay cambaareeyeen oo keliya balse aysan ahayn masuuliyad gaar ah oo ay leeyihiin Muslimiintu balse la dagaalanka argagixisada ay u taala dhamaan bulshada Sweden. Asagoo sheegay ujeedadoodu in ay tahay in ay sharaxaan islaamka iyo waxa uu ka qabo arintaan si aysan dadka kale qalad ugu fahmin. Dadkii ka soo qeyb galey qudbada ayaa fikrado isku mid ah ka dhiibtay arintaas ayagoo inta badan isku raacey xumaanta weerarkaas iyo dhibaatada uu u keeni karo Muslimiinta ku dhaqan Sweden. Balse waxay ka digeen in Muslimiintu ay isi saaraan masuuliyada weerarka , oo ay muhiim tahay in ay iska fogeeyaan. Weerarka ka dhacay Stockholm ayaa sii kordhinaya naceyb iyo shakiga laga qabo Muslimiinta ayadoo xisbiga cunsuriga ee SD uu isla markii weerarka dhacay ku dhawaaqay in dood laga yeesho Islaamka taasoo muujineysa sida ay uga faaideysanayaan arimaha nuucaan ah.
Qudbadii jimcaha ee masaajido badan oo ku yaal Sweden ayaa lagu soo qaaday weerarkii isqarxinta ahaa ee ka dhacay Stockholm sabtidii la soo dhaafay, ayadoo imamyadu ay cambaareeyeen weerarkaas kuna tilmaamey mid Islaamka ka soo horjeeda.
Masaajida laga cambaareeyay weerarkaas ayaa waxaa ka mid ahaa masaajidka weyn ee ku yaal xaafada Södermalm Stockholm ayadoo uu imamka yiri “In qof is dilo waa xaaraam, in uu dadkale dilana waa xaaraam balse waxaa ka sii daran in uu dad aan waxbo galabsan ku dilo magaca Islaamka”.
Omar Mustafa oo ah gudoomiyaha ururka Muslimiinta Stockholm ayaa sheegay in ay arintu tahay in ay cambaareeyeen oo keliya balse aysan ahayn masuuliyad gaar ah oo ay leeyihiin Muslimiintu balse la dagaalanka argagixisada ay u taala dhamaan bulshada Sweden. Asagoo sheegay ujeedadoodu in ay tahay in ay sharaxaan islaamka iyo waxa uu ka qabo arintaan si aysan dadka kale qalad ugu fahmin.
Dadkii ka soo qeyb galey qudbada ayaa fikrado isku mid ah ka dhiibtay arintaas ayagoo inta badan isku raacey xumaanta weerarkaas iyo dhibaatada uu u keeni karo Muslimiinta ku dhaqan Sweden.
Balse waxay ka digeen in Muslimiintu ay isi saaraan masuuliyada weerarka , oo ay muhiim tahay in ay iska fogeeyaan.
Weerarka ka dhacay Stockholm ayaa sii kordhinaya naceyb iyo shakiga laga qabo Muslimiinta ayadoo xisbiga cunsuriga ee SD uu isla markii weerarka dhacay ku dhawaaqay in dood laga yeesho Islaamka taasoo muujineysa sida ay uga faaideysanayaan arimaha nuucaan ah.